SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay kooxaha Tottenham Hotspur vs Manchester City ka hor kulankooda habeen dambe ee Champions League – Gool FM
SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay kooxaha Tottenham Hotspur vs Manchester City ka hor kulankooda habeen dambe ee Champions League
Haaruun April 8, 2019
(London) 08 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa marti gelinaysa habeen dambe naadiga Manchester City kulan ka tirsan Koobka horyaallada Yurub ee Champions League.
Labada kooxood ee ka wada dhisan dalka Ingiriiska ayaa isku qaban doona lugta hore ee siddeed dhammaadka tartanka Champions League kooxdii natiijo wanaagsan la timaada labada lugood ee quarter-finalka ayaana u gudbi doona afar dhammaadka tartankan koobka horyaallada Yurub.
Koox waliba Spurs iyo Man City waxa ay eegeysaa inay guul gaarto lugta hore si ay tallaabo ugu qaado u soo bixitaankeeda semi-finalka tartanka Champions League.
Haddaba shabakadda ciyaaraha ee Sporsmole ayaa shax isku dhaf ah ka sameeyay kooxaha Tottenham Hotspur iyo Manchester City ka hor kulankooda habeen dambe, Spurs ayaana la qadiyay iyadoo afar xiddig oo kaliya laga siiyay shaxdan isku dhafka ah.
Thomas Tuchel oo sharaxaad ka bixiyay sababta uu ugu diiday Mbappé inuu la tartamo Messi
Xafiiska ururka kubadda cagta Koonfur Galbeed oo maanta xarigga laga jaray… + SAWIRRO